Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်)
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ကို ခွဲစိတ်မှုများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ၊ သွေးလန့်ခြင်း၊ မီလောင်နာများ နှင့် သွေးထွက်ခြင်းများတွင် သွေးရည်ကြည် အစားထိုးအသုံးပြုပါသည်။
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ကို ဆရာဝန်က သွေးပြန်ကြောထဲသို့ တဖြေးဖြေးဝင်အောင်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် ကုသရပါသည်။
ဆေးကို အစာနှင့်တွဲသောက်ခြင်းက ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းများ မဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးပါလိမ့်မည်။
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ကို အခန်းအပူချိန်မှာ သိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့ နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော အပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းတို့ပြုလုပ်မိပါက ဆေးအဖတ်များဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအဖတ်များကို ရေ ၁၀၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်စ်တွင် အပူပေးခြင်း၊ ၁၁၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်စရှိသော အပူပေးမီးဖိုစက်ထဲတွင် ၁၅ မိနစ်ကြာမျှ အပူပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
သင့်တွင် ရေနွေးပူလောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန် တကောင်ကောင် အကိုက်ခံရခြင်းကဲ့သို့သော အနာများရှိလျှင်
နှာခေါင်းသွေးလျှံဖူးလျှင် ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထိုဆေးသည် မူးဝေစေသည့်အတွက် ကားမောင်းခြင်း၊ အလုပ်ခွင်တွင် စက်များကို မောင်းနှင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်များလုပ်စဉ် မူးဝေခြင်းဖြစ်လာပါက ထိုအလုပ်များကို ရပ်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါတို့သည် ဖြစ်လေ့ရှိသော မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါသည်။
ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း) ကို ခံစားရလျှင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
ထိုဆေးသည် အတက်ရောဂါရှိသူများတွင် တက်စေနိုင်သော်လည်း ထိုအခြေအနေမျိုးသည်ဖြစ်ခဲပါသည်။ တက်သွားလျှင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သွင်းရမည့်ဆေးပမာဏသည် လူနာ၏လိုအပ်ချက်၊ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် သွေးအပျစ်အကျဲ အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းအများဆုံးပေးရမည့်ပမာဏမှာ2g/kg (20 mL/kg)ဖြစ်ပြီး နောက် နေ့စဉ် အများဆုံး ပမာဏ 1 g/kg (10 mL/kg) နှင့် ၅ ရက်ဆက်တိုက် ပေးရပါမည်။
ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပတွင် သွေးလည်ပတ်ခြင်း
ပုံမှန်ပမာဏမှာ1–2 g/kg (10–20 mL/kg) ဖြစ်ပါသည်။
အများဆုံး ပမာဏမှာ2 g/kg (20 mL/kg). ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဆီဂျင်ပေးသော စက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကွာခြားသွားပါသည်။
သွေးကြောထဲတွင် သွေးခဲပိတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
သွေးကြောထဲတွင် သွေးခဲပိတ်နိုင်ချေရှိသော သူများတွင် (ခွဲစိတ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း)
ယေဘူယျအားဖြင့် ခွဲစိတ်မည့်နေ့တွင် 50–100 g (500–1000 mL [ပျမ်းမျှအားဖြင့် 10 mL/kg])ပေးပါသည်။
ထို့နောက် 50 g (500 mL)ကိုတနေ့လျှင် ၂ ရက်မှ ၃ရက် ဆက်ပေးပါသည်။
ထို့နောက် ထိုပမာဏအတိုင်း ၂ ပတ်မှ ၃ပတ်ဆက်ပေးပါသည်။
သွေးကြောထဲတွင် သွေးခဲပိတ်နိုင်ချေ အနည်းအများအပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပေးသည့်အချိန် ကွာခြားပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၁နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ0.5 g/kg (5 mL/kg) ဖြစ်ပါသည်။
၁နှစ်အထက် ကလေးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 1 g/kg (10 mL/kg) ဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်သော ကလေးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းအများဆုံးပေးရမည့်ပမာဏမှာ2g/kg (20 mL/kg)ဖြစ်ပြီး နောက် နေ့စဉ် အများဆုံး ပမာဏ 1 g/kg (10 mL/kg) နှင့် ၅ ရက်ဆက်တိုက် ပေးရပါမည်။
အရွယ်ရောက်သော ကလေးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ သွေးကြောထဲတွင် သွေးခဲပိတ်နိုင်ချေရှိသော သူများတွင် (ခွဲစိတ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း)ယေဘူယျအားဖြင့် ခွဲစိတ်မည့်နေ့တွင် 50–100 g (500–1000 mL [ပျမ်းမျှအားဖြင့် 10 mL/kg])ပေးပါသည်။
Onkovertin (အွန်ကိုဗာတင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
onkovertin ထိုးဆေးအရည် (dextran 40, sodium chloride 9% 500ml)
onkovertin (dextran 40, sodium chloride) ထိုးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထိုးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲထိုးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Onkovertin. http://drug-info.in/onkovertin-dextran-40-b-braun/.Accessed December 12, 2016
Onkovertin. https://www.epharmapedia.com/medicine/profile/254147/Onkovertin.html?lang=en&tab=druginfo.Accessed December 12, 2016
ONKOVERTIN IN NACL 0.9%. http://www.druginfosys.com/brand.aspx?code=7002.Accessed December 12, 2016